हिमाल खबरपत्रिका | “हामीलाई असफल हुने सुविधा छैन”
“हामीलाई असफल हुने सुविधा छैन”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका शत्तिाmशाली आकांक्षीहरूलाई पन्छाएर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी डा. युवराज खतिवडालाई सुम्पिएका थिए। आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याएका खतिवडाको आर्थिक नीति अहिले परीक्षणकालमै छ, तर उनीबारे पार्टीभित्र र बाहिरबाट मिश्रित टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र खतिवडाले अर्थतन्त्रको रथ कसरी हाँकिरहेका छन्, चुनौती कस्ता छन्, सरकारको काम किन अपेक्षा अनुसार भइरहेको छैन भन्ने विषयमा हिमाल खबरपत्रिकाले खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सारः
सडक कति किलोमिटर बन्यो, रेल्वे लाइन कति निर्माण भयो, विद्युत् कति उत्पादन भयो भन्ने कुराको जवाफ ठूलो अंकमा देखाउन सक्दिनँ होला । तर, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, हामी सरकारमा आएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु भएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको कानून, संगठन र कर्मचारी संरचनादेखि सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन साथै राज्य सञ्चालनका काममा लामो समय खर्चनुप¥यो । मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी झण्डै डेढ दर्जन कानून निश्चित समयभित्र निर्माणका काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हामीले ग¥यौं । त्यसबाहेक, दातृ निकायहरूसँग ठूला परियोजना निर्माणका लागि पूँजी परिचालन गर्ने कुरामा छलफल अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं ।
जनताको अपेक्षा त हुन्छ । निर्वाचनको बेला हामीले नै जनताका महत्वाकांक्षा बढाएका हौं । जनताले चुनाव जिताएपछि अब डेलिभर गर भन्नु स्वाभाविक हो । त्यो सेवा प्रवाह गर्न केही समय लाग्दो रहेछ । किनभने, हामी हिजोकै संरचनामा, हिजोकै बाध्यतामा र कतिपय अवस्थामा हिजो छिन्नभिन्न भएको शासकीय प्रबन्धमाथि बसेर शासन गरिरहेका छौं । नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू बल्ल बने, अब नागरिकमा राज्यले हामीलाई खाद्य सुरक्षा, कामको अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा दिन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति भएको छ । तर, त्यो प्राप्त गर्न संस्थागत संरचना बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि केही समय लाग्छ ।
पटक्कै छैन । हामीले गरेका कामको नियमित प्रतिवेदन निकाल्छौं, ती विवरण हेर्दा पनि हाम्रो प्रयास देखिन्छ । हामीले सरकार सम्हाल्दाको स्थिति, अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थाबाट अघि बढाइएको थियो, अहिले कसरी सुधार गर्दै अघि बढाइरहेका छौं भन्ने बाटै धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष देखिने काम चाहिं भौतिक पूर्वाधार हुँदोरहेछ । अनुभूति हुने काम भनेको तत्काल लोकप्रिय हुने सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम रहेछ । त्यसमा पनि, पैसा बाँड्यो भने लोकप्रिय भइँदोरहेछ । हामीले तत्कालको लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका कुरा अघि बढाउन खोज्दा समय लागेको हो ।
औसतमा ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि त्योभन्दा बढी नै उठेकोले यो सन्तोषप्रद छ । पक्कै पनि राजस्वलाई सही ढंगले परिचालन गर्नु हाम्रो दायित्व हो । यसका लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछौं । सार्वजनिक खरीद ऐनको नियमावली तत्कालै संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छौं । सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यक्रममा पनि प्राथमिकतासाथ काम भइरहेको छ ।
तरलताको स्रोत सरकारको खर्च मात्रै होइन, रेमिटेन्स पनि हो । अहिले रेमिटेन्सको वृद्धि उल्लेखनीय छ । यसमा ब्यांकिङ क्षेत्रको निक्षेप परिचालन, विदेशी सहायता र लगानीको पनि भूमिका हुन्छ । ब्यांकलाई बाहिरबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, कर्जाको माग कति हुन्छ भन्ने कुराले पनि तरलतामा असर गर्छ । विस्तार भइरहेको आर्थिक क्रियाकलापका कारण अहिले कर्जाको माग उच्च हुनु स्वाभाविक हो । त्यो चाप पूरा गर्न ब्यांकिङ प्रणालीले नयाँ स्रोत व्यवस्थापन नगरे समस्या आउन सक्छ । सरकारको खर्च प्रणालीका कारण तरलतामा थप दबाब नपरोस् भनेर हामी सचेत हुनुपर्छ ।
पछिल्लो बजेट आएपछि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूमा यो सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई दीर्घकालीन लाभका लागि काम गर्ने संकेत देखियो, त्यसैले सहयोग बढाउन सकिन्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ । त्यसैले, विश्व ब्यांकले सहायता बढाउने कुरा गरेको छ । द्विपक्षीय सहायता दिने देशले पनि सहायता बढाउन खोजेका छन् । हामीलाई बढी सहायता चाहिने क्षेत्र सडक, सुरुङ निर्माण, रेलमार्ग र विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणमा उनीहरूले सहायता बढाउने कुरा गरेका छन् । हामी आशावादी छौं । तर, यति भनिरहँदा पनि हामी करीब रु.३ खर्ब विदेशी सहायता परिचालन गरिरहेका छौं । हामीलाई वर्षको रु.५ खर्ब परिचालन नगरी पुग्दैन । त्यसैले, आगामी वर्ष रु.५ खर्ब विदेशी सहायता परिचालन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।
सदाचार नीतिबारे यो सरकारलाई नै थाहा छैन । सरकारले बहस नै अघि नबढाएको, शुरु नै नगरेको विषयमा उहाँहरूले बढी चिन्ता गरिरहेको जस्तो बुझेको छु । मैले दातृ निकायहरूसँग बारम्बार भनेको छु, सदाचारको विषय सरकारलाई थाहा छैन, तर सुशासनको विषयमा त उहाँहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो नि ! हामी सुशासन चाहन्छौं भन्दा के सरकारमा मात्र सुशासन चाहिने हो ? निजी क्षेत्रमा चाहिंदैन ? हामीलाई गैरसरकारी क्षेत्रमा, विकास सहायता गर्ने मुलुकहरूको काममा सुशासन चाहिंदैन ? समग्रमा विकास सरोकारवालाबीच सुशासनबारे प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । तर, सुशासन कायम राख्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले एकलौटी निर्णय गर्दैन । हामी छलफल र बहस गर्छौं, कसो गर्दा साझा मुद्दाहरूमा समझदारी हुन्छ त्यसै अनुसार अघि बढ्छौं ।
दातृ निकायहरूले आर्थिक वृद्धि तल्लो तहबाट प्रक्षेपण गर्छन् । सरकारले भने माथिबाट प्रक्षेपण गर्छ । हासिल हुने यी दुईको बीचमा हो । हामीलाई प्रतिव्यक्ति आय छिटो बढाउनु छ र अल्पविकसित मुलुकबाट माथि जानु छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तोक्छौं र हासिल गर्ने सत्प्रयास पनि हुन्छ । दातृ निकायहरू यो भएन भने यति मात्रै हुन्छ भनेर न्यूनतम आकलन गर्छन् । त्यसो हुँदा कहिलेकाहीं तथ्यांक मिल्दैन । कृषिको उत्पादन औसत ४ देखि ५ प्रतिशतले बढेन भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पु¥याउन अन्य क्षेत्रको वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुपर्छ, जुन स्वाभाविक हुँदैन । त्यसैले हामी कृषि क्षेत्रको वृद्धिलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौं । दोस्रो, उद्योग क्षेत्रको वृद्धि, पानी र बिजुलीका कुरा छन् । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, ठूला सिमेन्ट कारखाना कहिलेदेखि शुरु हुन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सेवा क्षेत्रको कुरा गर्दा, तरलतामा संकुचन भएन भने ब्यांकिङ सेवाको विस्तार भइरहन्छ, अरु सार्वजनिक सेवाको विस्तार पनि जारी रहन्छ । ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायलाई छिटो गराउन सके त्यहाँबाट पनि मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादन बढाउन सकिन्छ । आर्थिक वृद्धिमा निर्माणको योगदान धेरै हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको विशेष चासो छ ।
निजी क्षेत्र भनेर एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन । लगानीकर्ताहरू उत्साहित छन् कि छैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हो । लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत पहलकदमी लिइएको छ । जस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको नियमावली छिटै जारी गर्दैछौं । विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ, त्यो छिटै संसदमा लैजाँदैछौं । निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग अघि बढाउने दामासाही ऐन, कम्पनी ऐन संशोधन एवं व्यापारीहरूले जोड दिंदै आएको कालाबजारी ऐन खारेजी गर्न काम गर्दैछौं । विदेशी विनिमय ऐन संसदमा जाने क्रममा छ, लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन जस्ता कानून निर्माण गर्दैछौं ।
दोस्रो कुरा, लगानीका लागि ब्याजदर सस्तो हुनुपर्ने हो । ब्याजदरको कुरा ब्यांकको तरलता र पूँजीको लागतसँग जोडेर हेर्नुपर्छ, लागत घटाउने बारे सोच्दैछौं । तेस्रो कुरा, लगानीका लागि विद्युत् आपूर्ति र भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्दैछन्, तर सरकारले प्रसारण लाइन बनाइदिएन भन्ने आरोप हटाउन हामीले प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा पनि उनीहरूलाई नै दिने र त्यो रकम शोधभर्ना गरिदिने व्यवस्था गरिसकेका छौं । उद्योगलाई बाटो बनाइदिने भनेका छौं, तर ढिला भएमा आफैं बनाउन आग्रह गर्दै शोधभर्ना गरिदिने निर्णय गरिसकेका छौं । करको कुरा गर्दा, संस्थागत कर, मूल्य अभिवृद्धि करका दरहरू बढाएका छैनौं । यो भन्दा अनुकूल स्थिति के होला ? निजी क्षेत्रलाई त अहिले अवसर हो ।
यो चुनौतीको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा अमेरिकी संरक्षणवादको नीतिले अमेरिकाको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ । कतिपय ठूला व्यापारिक सम्बन्ध भएका मुलुकबाट आयात निरुत्साहित गरिएपछि त्यस्तो मानसिकता विकास भएको हो । त्यसको असर विश्वका सबै मुद्रामा परेको छ । भारतीय मुद्रासँगको स्थिर दरका कारण हामीलाई पनि त्यो चाप परेको छ । निर्यातकर्ताहरूलाई यसले प्रोत्साहन दिए पनि आयात बढिरहने निर्यात क्षमता नबढ्ने हुँदा हामीलाई थप चाप पर्छ । यसमा सरकार चिन्तित छ । तर, हामीसँग विकल्प पनि छैन । भारुसँगको स्थिर विनिमयदर सुविचारित रूपमै अघि बढाएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपाल र भारतले विपरीत आर्थिक धक्काहरू भोगे भने मात्रै स्थिर विनिमयदर सम्बन्धमा प्रश्न उठ्छ ।
बूढीगण्डकीको विषयमा, केही आयोजना यस्ता हुन्छन्, जसमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा पनि निर्माणको जिम्मेवारी तिनै कम्पनीले पाउँछन् । माथिल्लो कर्णाली, अरुणमा यस्तो उदाहरण छँदैछ । समय मात्रै खेर जाने हुन्छ । बूढीगण्डकी मूलतः हामीले नै बनाउने हो, ठेक्का अरुलाई दिएर । जसले ठेक्का लिन्छ, ऋण उसकै सहायतामा खोजिने हो । तर, परियोजनाको डिजाइन, ड्रइङ, वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारको नियमनकारी भूमिका रहन्छ । चिनियाँ कम्पनीले बनाउने इच्छा जाहेर गरेपछि मौका दिऔं न त भनेका हौं । यसमा मुख्य विवाद गर्नुपर्ने विषय चाहिं कति उँचाइको ड्याम बनाउने, कति क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्नेमा हो । बूढीगण्डकीको प्राविधिक पक्षमा समग्र पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । यसको डिजाइन र खर्चमा पनि सरकारको नियमन चाहिन्छ नै ।
माथिल्लो अरुणमा विश्व ब्यांक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लगानी गर्ने वचन दिएको छ । माथिल्लो त्रिशूलीमा पनि मुद्रा कोषले लगानी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैछ । दूधकोशी लगायतका परियोजनामा एशियाली विकास ब्यांकले इच्छा देखाएको छ । यो सबै गर्दा पनि यो त नेपाललाई दिने सहायताको पोर्टफोलियो भित्रबाट हो । मौलिक हक कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा उल्लेख्य रकम चाहिन्छ । त्यसैले परम्परागत दातृ निकायको स्रोतबाट मात्र पुग्दैन, नयाँ स्रोत खोज्नैपर्छ । विभिन्न देशका ब्यांकबाट रकम परिचालन गर्न पहल गरिरहेका छौं । केही ठूला आयोजना छिटो र पारदर्शी ढंगमा कार्यान्वयनमा लैजान कानून निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।
हामीलाई त्यसो नगर्ने सुविधा नै छैन । हामीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण छ, आवश्यक कानून निर्माण गर्न संसदमा प्रष्ट बहुमत छ । यस्तो बेला पनि नगरे कहिले गर्ने ? हामीले जसरी पनि लक्ष्य तोकेर अघि बढ्नैपर्छ । बरु, कसरी काम गर्ने, मन्त्रीहरूको जवाफदेही कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बहस हुनसक्छ । यो क्षेत्रमा यो काम भएन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा बहस हुनसक्छ । सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी कसको भन्ने विषयमा अर्कोतिर औंला सोझ्याउने प्रवृत्ति छ । सडककै उदाहरण लिंदा काठमाडौंको सडक निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको कि महानगरपालिकाको ? जिम्मेवारी बाँडफाँडको अन्योलले केही ढिलो भएको मात्र हो । तर, अनेकौं कारण देखाएर हामीले छूट पाउने अवस्था छैन ।